Trump;"Soomaaliya waa Dowlad la'aan, Amni la'aan, Boolis la'aan iyo Fowdo." - Jowhar Somali news Leader
Home News Trump;”Soomaaliya waa Dowlad la’aan, Amni la’aan, Boolis la’aan iyo Fowdo.”
Trump;”Soomaaliya waa Dowlad la’aan, Amni la’aan, Boolis la’aan iyo Fowdo.”
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay dalka Soomaaliya wadan aysan ka jirin dowlad,amni iyo ciidamo Boolis ah isagoo la hadlayay taageerayaashiisa.
Trump oo bilaabay ololihiisa doorashada ayaa qudbad u ka jeediyay Sabtidii gobolka Oklahama waxa uu ku soo hadal qaaday Ilhaan Cumar oo ka mid ah Congresska dalka Maraykanka isagoo ku tilmaamay inay dooneyso inay burburiso dalka Maraykanka kana dhigto sida Soomaaliya oo kale.
Inkastoo aysan u soo bixin qudbadiisa dad badan Madaxweyne Trump ayaa cod dheer ku yiri.””Waxay jeclaan lahayd inay dalkeenna ka dhigta sida dalkii ay ka timid oo kale- Soomaaliya. Dowlad la’aan, amni la’aan, boolis la’aan. Waxaa ka jirta fowdo uun. Hadda waxay rabtaa inay noo sheegta sidii aan dalkeenna u maamuli lahayn. Maya, waad mahadsan tahay.”
Madaxweynaha Maraykanka oo cabsi weyn ka qaba Ilhaan Cumar ayaa ka digey inay ka qeyb noqoto dowlada Maraykanka haddii uu ku guuleysto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ah ee Joe Biden doorashada dalka Maraykanka ee dhacaysa bisha November ee sanadkan.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa u sheegay taageerayaashiisa inay kaga guuleysan doonaan xisbiga dimuqraadiga magaalada Minnesota oo laga soo doorto Ilhaan Cumar,taasoo muujineysay cabsida uu ka qabo Ilhann Cumar.
Ilhan Cumar oo dhowaan uu geeriyooday aabaheed ayaan illaa iyo hadda wax jawaab ah ka bixin hadalka ka soo yeeray Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Hadalka Madaxweynaha Maraykanka ee uu ku tilmaamay Soomaaliya inayan dowlad ka jirin ayaa ku soo beegmaya xilli dowlada Maraykanka ay ku leedahay safiir buuxda dalka Soomaaliya.
Sii hayaha Ra’iisulwasaraha oo la shiray wakiillada Beesha Caalamka
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ka digey dagaal qabow oo cusub
Ra’iisul Wasaaraha magacaaban oo la horgeynayo Golaha Shacabka